Hush – Gold Channel Movies
Episode9Feb. 05, 2021
Episode 10 Feb. 12, 2021
Episode 11 Feb. 19, 2021
Episode 12 Feb. 26, 2021
Episode 13 Mar. 05, 2021
Episode 14 Mar. 12, 2021
Episode 15 Mar. 19, 2021
Episode 16 Mar. 26, 2021
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခေါက် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ “Hush” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပြီး သတင်းထောက်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေတွေကို ပေါ်လွင်အောင် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေရဲ့ ဘဝမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရတဲ့အခြေအနေတွေ ပြဿနာတွေနဲ့ ကျင့်ဝတ်အရ ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Jung Jin-Young ရေးသားထားတဲ့ “Chimmookjoouibo” ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Hwan Jung Min နဲ့ Girls’ Generation မှ ပရိသတ်အချစ်တော် Im Yoon-ah တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကို အကျဉ်းချုံးမိတ်ဆက်ရရင်တော့ Han Jun Hyeok ( Hwan Jung Min) ဟာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းသတင်းထောက်ဖြစ်ပြီး တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေဖို့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒနဲ့ လက်တွေ့ဝါဒကြားမှာ ထွေပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခင်ပွန်းတစ်ယောက်၊ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုပါ ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကို လက်တွေ့ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lee Ji Soo (Im Yoon-ah) ကတော့ အလုပ်သင်သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလုပ်အင်တာဗျူးလုပ်နေချိန်မှာတောင် ပြောစရာရှိတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုရဲတဲ့ ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Han Jun Hyeok ကို သူမရဲ့ ဆရာတစ်ဦးအနေနဲ့ တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်၊ journalist တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့က သူမရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုတော့ JTBC က အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းနဲ့ အပတ်စဉ် သောကြာနဲ့ စနေနေ့တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Gold Channel မှလည်း ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Translated by Hnin Aye Nyein,Phyoe and Youn Kyi Phyu